Kôlômbia: topi-maso ny fampiasan’ny any an-toerana ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Kôlômbia: topi-maso ny fampiasan'ny any an-toerana ny Twitter
Voadika ny 10 Mey 2010 8:13 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Nederlands, Français, македонски, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Nandritra ny fikarohana izay naharitra roa volana, ny vohikalam-pivondronana Twitter Colombia [es] dia nandinika Tweets miisa 3 tapitrisa izay nalefan'ny mpivoy mahatratra 20'000 avy any an-toerana, izany dia natao azahoana maka pikasary ny fomba fampiasan'ny mpivoy any ity fomba `micro-blogging’ iray manokana ity. Ny vokatr'izany fandinihana izany dia atontan'isa mikasika izay tokony ho toeteotry ny Toitaosy Kôlômbiana salasalany [es] [ndlr. ny namana Thierry Andriamirado (@tandriamirado)no nampiasa voalohany ny anarana hoe Toitaosy hiantsoana ireo mpivoy Twitter].
Raha atao ny salan'isa, dia manara-peo Toitaosy sahabo ho 128 ny Toitaosy Kôlômbiana iray ary mahatratra 176 kosa ireo izay manara-peo azy [ndlr. manara-peo no andikako ny `follow’], ary ny 13% amin'ireo mpampiasa ireo ihany no miaro ireo Tweet-ny amin'ny fitsidihan'ny olona tsy nomeny alàlana. Notadiavin'ny fikarohana hatramin'ny salan'andro sy ny salan'ora ampiasan'ireo Toitaosy, Alarobia sy 11:30 no valiny.
Navoitry ny fikarohana koa ny anaran'ireo Toitaosy Kôlômbiana izay voatònona anarana matetika indrindra nandritra izany fotoana izany. Anisan'ireo i Camilo Andrés García (@hyperconectado), ny mpanakanto Kôlômbiana mpivoy mozika Rock Juanes (@juanes), i Nicolás Samper (@udsnoexisten), i Sebastian Yepes (@sebastianyepes), ary Karem Díaz Robles (@karemvip).
Ambonin'ny fikarohana toy itony, sy fanazavazavana mombamomba ny blaogin'ny Twitter Kôlômbiana, ity vohikala ity dia mitsinjarazara koa ireo Toitaosy arakarak'izay lohahevitra voiziny toy ny Mozika, Gazety, Governemanta, ary Politika.